I-SEO elungileyo | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 26, 2014 Douglas Karr
Kwiveki ephelileyo bendonwabile ukudibana U-Anthony Duignan-Cabrera, intatheli, umphathi womxholo kunye nentengiso yedijithali oncedileyo Patch isibhakabhaka ngokuthandwa. Ndancipha xa ndaziswa njenge Umcebisi weSEO, nangona. Ngelixa ukubandakanyeka kwethu kulo mthengi kufuna nje ukubonisana nokukhangela, ndiye ndancipha kuba ibonisa umfanekiso othile wento endinokuyenza kumthengi. Ukuba udibene okanye umamele u-Anthony xa ethetha, uyamangalisa… buthuntu kwaye ngqo.
Ngokukhawuleza u-Anthony wathi akayithandi i-SEO. Impendulo yam… Nam!
Inkcazo yam esemgangathweni ngabantu kukuba i-SEO iphathwe njengengxaki yezibalo. UGoogle wenze umsebenzi omkhulu kule minyaka idlulileyo yokuguqula imeko eyoyikisayo- ukuya kwinqanaba endibhengezileyo I-SEO isweleke ngaphezulu kweminyaka emi-2 eyadlulayo. Iingcali zeshishini zakhwaza (kwaye zisenza njalo) ukuba lushishino olusebenzayo. Andivumi. Ngelixa sinceda abathengi bethu ngoomatshini be-SEO, siyakholelwa ukuba SEO enhle ayongxaki yezibalo konke konke, yingxaki yabantu. I-SEO elungileyo ifuna ukuthengisa umxholo okhethekileyo. Ukuthengisa umxholo okhethekileyo kumalunga nokwazi ukuba ngubani abaphulaphuli bakho, bakuphi, bangatsala njani, kwaye-ekugqibeleni-indlela yokuguqula.
Emuva ngo-2011 ndiye ndabona xa ndijonga indawo yam ukuba uninzi lotyelelo olufanelekileyo kakhulu aluzange luvele kumagama aphambili awaziwayo- kwaye Rhoqo azange zibekwe kakuhle kumagama aphambili ezaziqhuba olo tyelelo. Amagama aphambili afanelekileyo ayengumsila omde kunye nesenzi ... kwaye umxholo ohamba nawo wawufanelekile kwaye unyanzelekile. Ndikhawuleze ndachitha ixesha elincinci ndisebenzisa umxholo wam ukukhangela kwaye ndichithe ixesha elininzi ndibhala umxholo ongcono rhoqo. Olo shishino luhlawulelwe ... ukugcwala kwebhlog kuye kwaphindaphindeka kathathu ukusukela ngelo xesha.
Ukuba nesicwangciso se-SEO kule mihla kufana nokuba nesicwangciso esihle se-imeyile. Ndiyakholelwa ukuba yonke iarhente kufuneka iqonde iifayile ze- iziseko zokuphuculwa kweinjini yokukhangela kanye njengokuba bebeya kuqonda ukungena kwi-imeyile ubuchwephesha. Zombini zifuna iqonga eliqinileyo, kodwa-a SEO enhle Isicwangciso-qhinga sixhomekeke kwimixholo yakutshanje, rhoqo, efanelekileyo nesinyanzelayo. Ukuba ubukhethe izinto ezimbini - tyala imali kwi-backlinks kunye nasekusebenziseni amagama aphambili… okanye utyale imali kuphuhliso lomxholo (uyilo, uphando, ukubhala, ubuchule)… umxholo uya kuphumelela lonke ixesha.
Ukufumana i SEO enhle Umcebisi kunzima, kodwa akunakwenzeka. Ingcebiso yam kukujonga imibuzo yabo xa unqwenela ukugcina iinkonzo zabo. Ukuba baqala ngokufunda malunga neshishini lakho, indlela oqhuba ngayo ukukhokela, zithini iindleko zakho ngokukhokela, ngubani okhuphisana naye, uguqula kangakanani, kwaye uninzi lweshishini lakho luvela phi… babuza imibuzo eyiyo . Ukuba bona, endaweni yoko, bakuxelele ukuba ngawaphi amagama aphambili ekufuneka ubekwe kuwo kwaye wenze izithembiso malunga nokuba baya kukufumana nini apho, hamba. Ukuba bathembisa indawo 1 inqanaba… ubaleke.
SEO Elihle ayisiyiyo inqanaba. I-SEO elungileyo imalunga nokubhala umxholo omkhulu ofunyanwa ngokulula, ukhuthazwe kwaye kwabelwane ngawo. Xa umxholo omkhulu uhlasela i-Intanethi, abantu bayayifunda kwaye babelane ngayo. Xa abantu befunda kwaye besabelana ngaso, bayayikhankanya. Xa abantu beyikhankanya, uya kubeka kakuhle.
tags: into elungileyoGoogle +enjini yokukhangela nounumnqwazi omhlopheumnqwazi omhlophe seo
Imigca eBlurry yeNtengiso ibuya kuTyalo mali